Banaanbaxyo ka Socda Dalka Zimbabwe – AwKutub News
Banaanbaxyo ka Socda Dalka Zimbabwe
Waxaa isa soo taraya baaqyada caalamiga ee loo jeedinayo madaxda iyo shacabka dalka Zimbabwe, kadib markii rabshado ay ka dhaceen caasimada dalkaasi ee Harare. Dhinacyada siyaasadda ayaa midba midka kale ku edeeyay in iyaga ay bilaabeen rabshadaha. Booliska dalkaasi ayaa waxaa ay shegeen in saddex qof ay dhintee, kadib markii ciidammada booliska ay rasaas ku fureen taageerayaasha mucaaradka oo dibadbaxayay.
Dadka dibadbaxayay ayaa sheegay in wax isadaba marin ay hareesay doorashadii isniinta ka dhacday dalkaasi.
Afhayeen u hadlay hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi, Nelson Chamisa ayaa sheegay in si arxan dari ah loo dilay dadka. Madaxweynaha imika talada ee Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa ayaa rabshadihii dhacay ku edeeyay mucaaradka, isagoo na shacabka ugu baaqay inay isdejiyaan.
Rabshadahan ayaa yimid kadib markii guddiga doorashada ee dalkaasi ay shegeen in codadkii kuraasta barlamaanka ee la tiriyay uu ku horeeyo xisbiga talada haya ee ZANU-PF, waxaase ilaa iyo haatan aanan lagu dhawaaqin natiijada madaxtinimada.
Loollanka ugu weyn doorashada Zimbabwe ayaa waxaa la saadaalinayaa inuu u dhaxeyn doonto madaxweynaha imika talada haya ee Emerson Manangagwa oo matala xisbiga talada haya ee Zanu PF, da’diisu na ay tahay oo 75 jir iyo Nelson Chamisa oo ah ninka hoggaamiyo xisbiga mucaaradka ee MDC oo 40 jir ah.
Previous Entry Turkiga oo sheegay inay ka fal celin doonaan Cunaqabataynta Maraykanka ku soo rogeen Wasiiro Turkish ah.
Next Entry Itoobiya oo dhexdhexaadinaysa Ereteriya iyo Jabuuti